Curata: Curate Yakakodzera Zvemukati mebhizinesi rako. | Martech Zone
Mugovera, Nyamavhuvhu 10, 2013 Chipiri, April 5, 2016 Douglas Karr
Curata ndeyemukati curation software, ichikubatsira iwe nyore tsvaga, ronga uye ugovana akakodzera zvemukati zvebhizinesi rako.
Zvemukati curation ndiyo hunyanzvi nesainzi yekutsvaga uye kugovana zvemhando yepamusoro zvemukati pane imwe nhaurwa. Kuratidzira kunobatsira iwe kuvaka vateereri. Iwe unobva wave neboka rakakura revanhu vaunogovana navo zvemukati, uye ndiani anogona kufambisa iro shoko. kuburikidza Neicole Crepeau pane Kugutsikana uye Shandura
wana - Curata inoramba ichitsvaga pawebhu kuti ione zvirimo zvebhizinesi rako. Ipuratifomu inokubatsira iwe kuti uwane zvitsva uye zvine chinangwa zvemukati zvemukati, gadziridza uye gadzirisa zvirimo kuyerera nekutora nekugadzirisa masosi uye kugadzirisa
izvo zvitsva - kudzidza zvemukati zvaunofarira seyako curate.
Ronga - Catalogs zvirimo zvinehungwaru kuti ugone kuwana zvauri kutsvaga. Izvo zvemukati zvinogona kuiswa mumapoka uye kurongedzwa saka zviri nyore kuwanikwa nemazano ekuvandudza yako SEO uye nevateereri kubatanidzwa. Nekufamba kwenguva, chikuva chinogadzira chinyorwa chemukati chekuwedzera rako rekutsvaga injini.
mugove - Govera zvirimo kune imwe, zvimwe kana dzese nzvimbo dzako dzepamhepo. Iwe unogona kududzira, kugadzirisa uye nekutaura pane ako akarongedzwa zvemukati, kushambadzira kune vateereri vako kuti, kupi uye sei iwe unosarudza uye kuyera iwe mhedzisiro kuitira kuti iwe uwedzere kusvika kwako kune vateereri vauri kutsvaga.
Tags: content curationContent Marketingcuratacurationcuration appcuration chikuva
Kugamuchira Dhizaini, Kuiwana Yakarurama